justfreeman: september 2011
Posted by justfreeman at 15:310comments
Posted by justfreeman at 15:220comments
ခင်ဦးသာ Friday, 30 September 2011 16:47 .
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအားလက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းတွင်ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ ယနေ့ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည်ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဆန္ဒကိုသွေဖီနေသည်ဟု ဦးသိန်းစိန်က ဆိုသည်။
ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောဆိုချက်အား မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်နေကြသူများက ကြိုဆိုလိုက်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ပြည်သူလူထု၏အသံကိုအလေးထားမည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည့်အပြင်ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးသိန်းစိန်တို့တွေ့ဆုံမှု၏ ရလဒ်တခုဟုလည်းယူဆနိုင်ကြောင်းဧရာဝတီရှင်သန်ရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်သောကိုမြတ်သူက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ပြောသည်။
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးကာဧရာဝတီမြစ်ကြီးတိမ်ကောပပျောက်သွားမည်ဟု ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပညာရှင်များက ထောက်ပြ ကန့်ကွက်နေကြပြီးလူထုလှုပ်ရှားမှု တချို့ပင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်လာ၃ဒသမ၆ဘီလီယံကုန်ကျမည့်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား၂၀၀၆ခုနှစ်တွင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ဦးဆောင်တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။စီမံကိန်းပြီးစီးပါကလျှပ်စစ်မဂ္ဂါဝပ်၆၀၀၀ပမာဏ ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ထိုအထဲမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ရန် သဘောတူထားသည်။
ဒေသခံပြည်သူ၁၂၀၀၀၀န်းကျင်အထိပြောင်းရွှေ့ပေးရသည့်စီမံကိန်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများတွင်ယခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှ စတင်၍ တိုက်ပွဲများ အဆက်မပြတ်နေသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ယနေ့ပြောဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလနန်က“ရပ်ဆိုင်းထားမယ်ဆိုတာကိုကြိုဆိုပါတယ်၊ဒါပေမယ့်တနှစ်ရပ်တာလား၊ဘယ်လောက် ရပ်ဆိုင်းတာလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ၊ကျနော်တို့ကအပြီးအပိုင်ရပ်ဆိုင်းတာကိုပဲ လိုလားပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ပြောသည်။
“အလွှာအသီးသီးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက် ဖိအားပေးနေကြတဲ့အတွက် သမ္မတက အလျော့ပေးတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ဦးလနန်က ဆိုသည်။
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းရပ်တန့်ရေးဆောင်ရွက်နေသည့်သူများကလည်း၎င်းတို့၏Facebook စာမျက်နှာများတွင်သမ္မတ၏ပြောဆိုချက်အားကြိုဆိုကြောင်းရေးသားထားကြရာထိုအထဲတွင် ကာတွန်းဆရာအော်ပီကျယ်၊ ကချင် ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာ၊ စာရေးဆရာ မောင်ဝံသ စသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်။
.ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမြန်မာ-အိုမန်ပွဲစဉ်တွင်မြန်မာပရိသတ်တချို့၏ရမ်းကားမှုကြောင့်ပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်ရ ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(MFF)ကိုကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(FIFA)က အရေးယူလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာပရိသတ်တချို့၏ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကွင်းအတွင်းရှိအိုမန်အသင်းအရံကစားသမားများ တိမ်းရှောင်နေရပုံ (ဓာတ်ပုံ-ဧရာဝတီ)
ထိုဖြစ်ရပ်အတွက်FIFAကမြန်မာဘောလုံးအသင်းကိုရုရှားနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့်၂၀၁၈ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးဒဏ်ငွေအဖြစ်ဆွစ်ဖရန့်၂၅၀၀၀ (ဒေါ်လာသုံးသောင်းခန့်)ချမှတ်ခဲ့သည့်အပြင်ကြားနာမှုအတွက်တရားစရိတ်ဆွစ်ဖရန့်၂၀၀၀ကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် AFP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည်ဇူလိုင်လအတွင်းက၂၀၁၄ကမ္ဘာဖလား ခြေစစ်ပွဲတွင် အိမ်ရှင် မြန်မာအသင်းက အိုမန်အသင်းအား ၂ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်စဉ်မြန်မာပရိသတ်တချို့ကကွင်းအတွင်းခဲများ၊ရေဗူးများ၊သံချွန်များ၊ထီး၊ဖိနပ် အစရှိသည့်တို့နှင်ပစ်ပေါက်ခဲ့သည့်အတွက်ပွဲဖျက်သိမ်း ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ FIFAက အရေးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 14:440comments
သန်းထိုက်ဦး Friday, 30 September 2011 18:37
တိုက်ပွဲများကကချင်ပြည်နယ်မိုးညှင်းမြို့ရှိငှက်ပျောတောကျေးရွာ၊မံစီမြို့အနီးအနားအထိ ဖြစ်ပွားလာနေကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO)တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးလနန်ကဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“တပ်မဟာ၎ဘက်မှာတော့တိုက်ပွဲဟာလုံးဝကျယ်ပြန့်သွားပြီးအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျနော်တို့ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်တိုက်နေကြတယ်” ဟုဦးလနန်ကဧရာဝတီကို ပြောသည်။
တပ်မဟာ၎ဒေသသည်စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှစတင်၍ အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်လိုင်ဇာဒေသသို့ ဦးတည်လာသောအစိုးရတပ်တို့နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ KIA ဒေသသီးသီးကို စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု တိုးလာသည်ဟု ဆိုသည်။
“မြစ်ကြီးနားကနေပြီတော့ရွှေညောင်ပင်ဘက်ကိုသူတို့တပ်အင်အားဖြည့်တာရှိတယ်၊နောက်ပြီးတော့ မြစ်ကြီးနားကနေဧရာဝတီမြစ်လမ်းကြောင်းဆင်းပြီးတာလောကြီးဘက်က၀င်လာဖို့ရှိတယ်၊ဗန်းမော်မြို့ အနောက်ဘက်ခြမ်အဲဒီကနေလည်းတက်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်၊ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့တပ် ဦးတည်လာတာကို စုလိုက်ရင် ကျနော်တို့ဘက်ကို ဖြစ်နေတယ်” ဟု ဦးလနန်က ရှင်းပြသည်။
KIA ဘက်ကလည်း ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သူက ပြောသည်။
“လိုင်ဇာဒေသကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီဒေသတော့သူတို့အတွက်သတ်ကွင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်၊သူတို့ သိမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအဝေးကနေလက်နက်ကြီးတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ပစ်ကြမယ်လို့ထင်တယ်”ဟု ဦးလနန်က ဆိုသည်။
KIAကတိုက်ပွဲအခြေအနေများ၊၎င်းတို့၏သဘောထားများကိုသတင်းဌာနများသို့ပြောဆိုနေချိန်တွင်အစိုး ရက စစ်သတင်းကို အမှောင်ချထားသည်။
နှစ်ဖက် အကျအဆုံး စာရင်း၊ ထွက်ပြေးနေရသည့် ဒေသခံ အရေအတွက်တို့ကို မသိရှိရသေးပေ။
Posted by justfreeman at 14:360comments
Posted by justfreeman at 16:280comments
Posted by justfreeman at 16:170comments
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ယမန်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တွင်းမြို့နယ်အများစုတွင်ရေကြီးရေလျှံခဲ့ပြီးနေအိမ် များအတွင်းရေနှင့်အတူအဆိပ်ရှိသတ္တဝါများမျောပါလာသောကြောင့်လူအများသတိထားနေရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊သာကေတမြို့နယ်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နှင့်တောင်ဥက္ကာလာပမြို့နယ်များရှိ လူနေရပ်ကွက်တချို့တွင်ရေကြီးရေလျှံခဲ့ပြီးကျောင်းတချို့ပိတ်လိုက်ရကြောင်း၊နေအိမ်များထဲသို့ ရေနှင့်အတူမြွေများ၊ကင်းများစသည့်အဆိပ်ရှိသတ္တ၀ါများဝင်လာသောကြောင့်နေအိမ်ထဲများထဲတွင် သဲအိတ်များခင်းပြီးသတိဖြင့်သွားလာနေထိုင်နေရကြောင်း အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရပ်ကွက် ၁၀၈ တွင် နေထိုင်သူ ဦးဖုန်းမြင့်က ပြောသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၁၉ရပ်ကွက်၊အမှတ်၅၀၂ နံ့သာမြိုင်လမ်းတွင်နေထိုင်သောမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် မောင်ဝေယံဇော်ဆိုသူမှာရေမြောင်းများအားရှင်းလင်းရင်း ရေစီးဖြင့်မျောပါသွားခဲ့ကြောင်း၊၎င်းကို ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၂၆ ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူအသက်၁၇ နှစ်အရွယ် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးက ကယ်တင်လိုက်သောကြောင့် အသက်အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။
“မိုးရွာပြီးရေလျှံတော့ကျနော်တို့အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရေမြောင်းတွေထဲကအမှိုက်တွေကိုလိုက် ဆယ်ပေးရင်းမြောင်းထဲကျသွားတာပါ။ကယ်ဆယ်တဲ့သူရှိလို့အသက်မသေဆုံးရတာ”ဟုတာဝန်ခံ မီးသတ်ရဲဘော်က ဆိုသည်။
မိုးစရွာသည်နှင့်ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိလူနေရပ်ကွက်များ၊ လမ်းများအားလုံးနီးပါးမှာရေမြုပ်ပြီး နေအိမ်များအတွင်းသို့ ရေ၀င်လေ့ရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း စသည့်ဒေသများသည် ငမိုးရိပ်ချောင်းနှင့် နီးသော်လည်း ရေထုတ်မြောင်းများပိတ်နေသောကြောင့် ရေစီးဆင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လူနေရပ်ကွက်များအတွင်းသို့ ရေများ ၀င်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်လည်းမိုးရွာသွန်းချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်ရုံဖြင့်လမ်းများရေလျှံခြင်း၊ နေအိမ်များအတွင်း ရေ၀င်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် ဖြေရှင်းပေးရန် လူအများက မျှော်လင့်နေကြသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“မနေ့ကမိုးရွာတော့ရေတွေကဒူးခေါင်းလောက်အထိဝင်လာတယ်။တနေကုန်ပဲရေတွေ တက်တက်လာတာ။ ရေတွေ ခပ်ထုတ်နေရတော့ ရုံးမတက်နိုင်ဘဲ ခွင့်ယူလိုက်ရတယ်” ဟု ကိုသားထွေးက ဆက်ပြောသည်။
တချို့အိမ်များမှာလမ်းများ၊ရေမြောင်းများထက်အမြင့်တွင်ဆောက်လုပ်ထားကြသော်လည်း မိုးရွာသည့်အခါ မိုးရေများမှာရေမြောင်းများနှင့် အပြည့်ဖြစ်လာပြီး လမ်းများမှတဆင့် နေအိမ်ထဲအထိ စီးဝင်လာသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
“လမ်းပေါ်မှာ ရေတွေကဒူးလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျနော်တို့အိမ်ထဲရေ၀င်ပြီ”ဟု ကိုသားထွေးက ဆိုသည်။
၎င်းအိမ်ရှေ့တွင် ရေမြောင်းရှိနေသောကြောင့် ရေမြုပ်သည့်အချိန်တွင်ရေမြောင်းနေရာကို မှတ်သားကာ သတိဖြင့် သွားလာနေရကြောင်း၊ မိုးရွာသည့်အခါ ရေမြောင်းတွင်းသို့ မကြာခဏ ပြုတ်ကျကြသူများ ရှိကြောင်း သူကပြောပြသည်။
ကိုထွေး Thursday, 29 September 2011 16:21 .
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အလုပ်သမားရေးရရာနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့သောကြာနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံကြမည် ဖြစ်သည်။
ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုအပြီး၂၀၀၈ဇန်နဝါရီလအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးအောင်ကြည်တို့ တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
ရန်ကုန်မြို့ရှိစိမ်းလဲ့ကန်သာနိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ၌တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးမည်ဟုအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြောခွင့်ရ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာကိုမသိရသေးသော်လည်းယခင်ကဆွေးနွေးသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက် ဆွေးနွေး နိုင်ကြောင်း သူက ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
သို့သော်လည်းလေ့လာသူများကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စ၊ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ကြသည်။
ယမန်နှစ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဦးအောင်ကြည်နှင့် ၂ ကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပူးတွဲ ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့ ဆွေးနွေးပွဲရလဒ် တိုးတက်မှုရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့ဖူးသည်။
တချိန်တည်းတွင် ယခု သီတင်းပတ်အတွင်း ကျင်းပသည့် ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏ မောင်လွင်ကလည်း အကျဉ်းသားများကို မကြာမီ လွှတ်ပေးရန် ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်များကလွတ်မြောက်ရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိပြီး၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်၊လူရွှင်တော်ကိုဇာဂနာတို့အားလွှတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုသော ကောလာဟလများ ပျံ့နှံနေသည်။
“မနေ့ကတည်းကအဲဒီသတင်းတွေကပျံ့နေတာ။အဲဒါနဲ့မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကိုဖုန်းဆက်တော့ ဟိုမှာရှိနေတုန်းပဲလို့ ပြောတယ်” ဟု ကိုဇာဂနာ၏ ခယ်မဖြစ်သူ မထွေးထွေးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၅ မိနစ် .
ရန်ကုန်(မဇ္ဈိမ)။ ။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကနယူးယောက်မြို့တွင်ကျင်းပနေသည့်၆၆ကြိမ် မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်မကြာခင်အကျဉ်းသားများလွတ်ပေးရန်ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့
နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးနောက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရင်းထောင်ဒဏ်၃၅နှစ် ကျခံနေရသူမြစ်ကြီးနားထောင်ကြိုးတိုက်တွင်ရှိနေသောဇာဂနာ၏ခယ်မမငြိမ်းခေါ်မစန္ဒာနှင့်မဇ္ဈိမ သတင်းထောက်ကမေးမြန်း ခဲ့သည်ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
“အမတို့အနေနဲ့မိသားစုအနေနဲ့တော့လွတ်တယ်ဆိုရင်ပျော်ရမှာပါဒါပေမယ့်အခုသတင်းကပျံ့နေတာ နေ့တိုင်းလည်းဖုန်းတွေဖြေနေရတာပေါ့နော်။မြစ်ကြီးထောင်ကိုမေးပြီးပြီကိုသူရကထောင်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်တဲ့။အမကတော့ကိုသူရကို၂၀၀၈ကဖမ်းကတည်းကပဲ၂၀၀၉ကစပြီးတော့စက်တင်ဘာကို ရောက်တိုင်း လွတ်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာအခုဆိုရင်၃နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီစက်တင်ဘာမှ ထွက်တဲ့ သတင်းအပေါ်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမယ့်ကိုသူရကိုလွတ်စေချင်တယ်။မျှော်လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်”
ပါတီတခုခုကိုကော ဝင်စေချင်တာမျိုး ရှိလား။
“ကိုသူရကအရင်ကပဲပါတီနိုင်ငံရေးကိုမကြိုက်ဘူး။အဲဒီအတွက်ပါတီတခုခုမှာသူဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုအဖမ်း ခံရတာကိုကလည်းလူမှုရေးလုပ်ရင်းအဖမ်းခံရတာလေသူကလူမှုရေးကိုတောက်လျှောက်လုပ်မယ့် သဘောရှိပါတယ်။”
တကယ်လို့နောက်ထပ်ထောင်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် မိသားစုအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလား။
“နောက်ထပ်ထောင်ကျတာမျိုးကိုတော့မလိုချင်တော့ဘူးပေါ့။ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းရင်ဆိုင်ရပြီ ဆိုရင်လည်း အမတို့ မိသားစုအနေနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ မဖြစ်တော့ မဖြစ်စေချင်တော့ဘူးပေါ့။”
အခုထောင်ကျနေလို့ ဘာတွေထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။
“ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုတော့ဒါကကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။အကျဉ်းကျခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုတိုင်းသောကတွေဒုက္ခတွေရှိမှာပဲဒါကိုနစ်နာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့။နစ်နာတယ်လို့ မသုံးရက်ဘူး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုတိုင်း အတွက်ပါ”
“အရင်ကအစိုးရလက်ထက်ကတော့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မရခဲ့ဘူး။ တကယ်လို့သာ လွတ်လာရင်တော့လည်း
ကိုသူရမှာဇနီး၊သား၊သမီးတွေကပြည်ပမှာဆိုတော့အလည်သွားရင်လည်းသွားနိုင်အောင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ရမယ်၊ မရဘူးတော့ မသိဘူးပေါ့နော်။”
အခု မြစ်ကြီးနားထောင်က ကိုဇာဂနာရဲ့ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
“အရင်ကအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာဆိုရင်မိသားစုနဲ့တွေ့ရင်ဆန်ခါ(ဇကာ)အပေါက်လောက်ပဲရှိတဲ့ သံဇကာ အပေါက်လေးတွေကနေလက်ထိပ်လေးတွေထိရတာမျိုးရှိခဲ့တာရယ်။ကိုသူရကိုမိသားစုနဲ့ပေးတွေ့ဖို့ ခေါ်လာရင်အိတ်နက်ကြီးကိုခေါင်းမှာစွပ်ပြီးတော့ခေါ်လာတာတွေကိုအမရဲ့အမဖြစ်တဲ့ကိုသူရဇနီးက ပြောခဲ့ဖူးတယ်။အခုတော့မြစ်ကြီးနားထောင်မှာကိုသူရနေရတာကြိုးတိုက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ကြိုးပေးပြီးသတ်မယ့် သူတွေကို ထားတဲ့နေရာမှာ ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နေကောင်းပါတယ်။ ခုနကပဲ မြစ်ကြီးနားထောင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရ တယ်။ ထောင်ထဲမှာပဲ ကိုသူရ ရှိနေပါတယ်တဲ့။ အရင်က အစားအစာတွေ ပို့တာနဲ့ စာရင်တော့ အဆင်ပြေတယ်ပဲပြောရမှာပါ။ အရင်က အစားအစာ။ ပစ္စည်းတွေကို လအလိုက်နဲ့ကန့်သက်ပြီးတော့ပို့ရတာမျိုးရှိခဲ့တယ်လေ။အခုတော့များများပို့လို့ရတာပေါ့နော် ဥပမာ တလကိုကော်ဖီမစ် အထုပ် ၃ဝ ပဲ ပို့ ရတာမျိုး ရှိခဲ့တာကနေ အခုကျတော့ အများကြီးပေါ့ အမတို့ကတော့ အရင်ထက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့။ အဲဒါမျိုးလေးတွေတော့ ရှိတယ်။
ဧရာဝတီ Wednesday, 28 September 2011 12:06
.ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်၊ဘုရားသုံးဆူဒေသမှအလုပ်သမား၃၀၀၀ခန့်ကိုထိုင်းနယ်စပ်အာဏာပိုင် တို့နှင့်နိုင်ငံတကာကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းများကတနင်္လာနေ့မှ စတင်ပြီး ရောဂါရှာဖွေ စမ်းသပ်မှု အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။
“ဒီအစီအစဉ်ကတပတ်ကြာပါလိမ့်မယ်။တရက်ကိုအလုပ်သမား၆၀၀နှုန်းစစ်ဆေးပေးမှာပါ။ကူးစက်ရော ဂါတွေထိုင်းနိုင်ငံထဲပြန့်ပွားမှာကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်နေတာပါ”ဟု ရောဂါရှာဖွေ စမ်းသပ်သည့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူ အရာရှိတဦးဖြစ်သည့် Mr. Chuit Nakthongkham က ပြောသည်။
“တကယ်လို့အလုပ်သမားတယောက်မှာကူးစက်ရောဂါရှိတယ်ဆိုပါစို့။အဲဒါဆိုရင်သူ့ကို အလုပ်ခဏနားခိုင်းဖို့ အလုပ်ရှင်ကိုပြောမယ်။ပြီးတော့ကုသမှုခံယူရမယ်”ဟု Mr.ChuitNakthongkhamက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
American Refugee Committee (ARC) က အခမဲ့ ကုသပေးမည်ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
“တနေ့တုန်းကကျန်းမာရေးဆေးစစ်တဲ့အခါမှာအဆုတ်ရောဂါဖြစ်တာ၎ယောက်ရှိတာတွေ့ရတယ်”ဟု ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်သည့်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ကူညီသည့်ဘုရားသုံးဆူမှရပ်မိရပ်ဖတဦးဖြစ်သူ နိုင်လရီရတ်က ပြောသည်။
“အလုပ်သမားတွေကူးစက်ရောဂါရှိလို့မဖြစ်ဘူး။အဲဒါ သူတို့ (ထိုင်းအစိုးရ) ရဲ့ မူဝါဒလေ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဘုရားသုံးဆူတွင် နေထိုင်သော ထိုအလုပ်သမားများသည် နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ညပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်ဘက်သို့ ပြန်သူများ ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်၂နှစ်ကလည်းအလုပ်သမားများအတွက်ကျန်းမာရေးအခမဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ဤဒေသတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ဒီနှစ်တော့ အလုပ်သမားအရေအတွက် ပိုများလာတယ်။ မနှစ်ကဆိုရင် အလုပ်သမားက ၂၀၀၀ လောက်ပဲ ရှိတာ” ဟု ARC မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်သည့် ကိုမင်းမင်းက ရှင်းပြသည်။
ကျန်းမာရေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုသည့်နေရာကိုနံနက်၉နာရီမတိုင်မီကပင်မြန်မာပြည်သား အလုပ်သမားများ စုဝေး ရောက်ရှိနေကြသည်။
အလုပ်သမားများ လျှောက်လွှာပုံစံရေးသွင်းခြင်း၊ လက်ဗွေနှိပ်ခြင်းများ ပြီးစီးပါက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့က ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးပေးကြသည်။
အလုပ်သမားအများအပြားမှာ ဆယ်ကျော်သက်များ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများက သနပ်ခါး လိမ်းထားကြသည်။
စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် တွန်းအားပေးသည့် အနေဖြင့် အလုပ်ရှင်တို့ကလည်း လုပ်ငန်းခွင်မ၀င်ဘဲ ရောဂါရှာဖွေရေးစခန်းသို့သွားသော အလုပ်သမားများကို နေ့စားခ ပေးသည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒီနေ့ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘူး။အလုပ်မလုပ်ပေမယ့်ဒီနေ့အတွက် အလုပ်ရှင်က ပိုက်ဆံပေးတယ်” ဟု အလုပ်သမားတဦးက ပြောပြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ စံခလပူရီမြို့WorldVisionအဖွဲ့ ၀န်ထမ်းများက ဆေးစစ်ရန်ရောက်လာသော အလုပ်သမားတို့ကို နေ့လယ်စာကျွေးပြီးကျန်းမာရေးပညာပေးနေကြသည်။ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နည်း လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ကွန်ဒွန်များ ဖြန့်ဝေနေသည်။
နေ့လယ်စာစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အလုပ်သမားတို့ကWorldVisionအဖွဲ့ကစီစဉ်သည့်ဘောလုံးပစ်ပြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းရယူသော ကစားနည်းတွင် ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်နေကြသည်။
သန်းထိုက်ဦး Wednesday, 28 September 2011 16:48
.အစိုးရတပ်များ၏ထိုးစစ်ကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)ကရှမ်းပြည်နယ်ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိ ၎င်း၏အမှတ်၎တပ်မဟာဌာနချုပ်နှင့်စခန်းတချို့မှယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဆုတ်ပေးလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရတပ်၏၁၂၀၊၁၀၅မမအမြောက်များနှင့်၅ရက်ကြာပစ်ခတ်သည့်ဒဏ်ကိုမခံနိုင်သောကြောင့် ဆုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော်လည်းထိုနေရာသည်စစ်ရေးအရဗျူဟာမကျကြောင်း၊အစိုးရတပ်ကယင်းနေရာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း KIA တပ်မဟာ ၄ တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ရောက ပြောသည်။
“အစိုးရတပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချဉ်းကပ်လာနေတယ်၊တပ်ရင်းပေါင်း၂၀ကျော်သွားပြီးအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် အင်အား၂၀၀၀နီးပါးလောက်ရှိမယ်၊ကျနော်တို့ကပြောက်ကျားစနစ်နဲ့ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်”ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ရောက ဆိုသည်။
အစိုးရတပ်များကို ခုခံတိုက်ခိုက်နေသည့် တပ်ရင်းများမှာKIAတပ်ရင်း ၁၇ နှင့် ၂၉ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည်။ KIAဘက်မှရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSA)မြောက်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့ကူညီ တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု သိရသည်။
“ကျနော်တို့ဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့နေရာဝန်းကျင်နဲ့တခြားနေရာတွေပါတန်ပြန်ပြောက်ကျားစနစ်နဲ့ပြန်တိုက်နေ တယ်” ဟုဗိုလ်မှူး ဇော်ရောက ဆက်ပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်း မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကားလမ်းမ၏အနောက်ဘက်ရှိKIAတပ်ရင်း ၈ လှုပ်ရှားနေသော ဒေသ၊ KIA တပ်ရင်း ၂ ဒေသများတွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်အကျအဆုံးစာရင်းများကိုမူမသိရှိရသေးပေ။ တိုက်ပွဲများကြောင့်ဒေသခံကချင်၊ရှမ်း၊ပလောင်တိုင်းရင်းသားများကတရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မူဆယ်မြို့နယ်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အများစုမှာကွတ်ခိုင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှဖြစ်သည်။
ထိုဒေသမှတိုက်ပွဲများရက်အတန်ကြာလာပြီဖြစ်သော်လည်းမြန်မာအစိုးရကသတင်းထုတ် ခြင်း မရှိသေးပေ။
စစ်အစိုးရသည် မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်း တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအနီးရှိ KIAတပ်များအား လုံခြုံရေးအရစိတ်မချဟုအကြောင်းပြ၍ထွက်ခွာရန် ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးနောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည့် အစိုးရတပ်နှင့်KIAအကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး ရသူပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် တလျှောက်ရှိ KIAထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများ၊ မြစ်ကြီးနား နှင့် ဝိုင်းမော်မြို့တို့ရှိ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ၊ ဆွေမျိုးများထံတွင် ဒုက္ခသည်များ ခိုလှုံနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 13:550comments
ခင်ဦးသာ Wednesday, 28 September 2011 16:32
.ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရာတွင်လွှတ်တော်တွင်သာမက ပြည်သူတရပ်လုံးပါဝင်နိုင်သည့်ဆန္ဒခံယူသောနည်းလမ်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF ပါတီ) က အစိုးရကို အင်္ဂါနေ့တွင် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာလ၂၇ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သည့်ကြေညာချက်တွင်ထိုစီမံကိန်းသည် တမျိုးသားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သဖြင့်လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်နှင့်လုံလောက်မည်မဟုတ်ဟုNDF၏ ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
“မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိစ္စကို ပြည်သူ တရပ်လုံးရဲ့ ဆန္ဒ တိုက်ရိုက်ခံယူသောနည်းနဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်သင့်တယ်၊ အဲဒီလို မလုပ်နိုင်သေးဘူး ဆိုရင် စီမံကိန်းကို အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားသင့်တယ်” ဟု NDF ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ပြောသည်။
စီမံကိန်းအားရပ်တန့်ရန် ပညာရှင်များ၊ ပြည်သူများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ကန့်ကွက်မှု ကျယ်ပြန့်လာပြီးနောက်လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောကိစ္စအပေါ်NDFပါတီက အလွန်အမင်း စိုးရိမ်နေသည်ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
“ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါဆိုရင်တားဆီးမရတော့ပါဘူး၊ဒါကြောင့် ပြည်သူ့တွေရဲ့ဆန္ဒကိုတိုက်ရိုက်ခံယူဖို့NDFကကြေညာချက်ထုတ်တောင်းဆိုရတာပါ”ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက ရှင်းပြသည်။
အာဏာရပါတီဖြစ်သောပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ကိုယ်စားလှယ်အများစုက လွှတ်တော်တွင်လွှမ်းမိုးနေသည့်အပြင်ထိုပါတီခေါင်းဆောင်အများစုသည်လည်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါသော အနေအထားမျိုး ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နည်းကျကျ ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူရန် လိုအပ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
တခြားသော နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၏ မြစ်ဆုံဆည်အရေး ဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်ပြီး ကာလအတန်ကြာတွင် NDF ၏ ကြေညာချက် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
NDFကြေညာချက်တွင်မြစ်ဆုံအရေးသည်တမျိုးသားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်လည်းအရေးကြီး၍တဖွဲ့တသင်း၏လွှမ်းမိုးမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သင့်အရာမဟုတ်ဟု ရေးသားထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိမေခနှင့်မလိခမြစ် ပေါင်းဆုံရာ နေရာ၌ တည်ဆောက်နေသော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမဂ္ဂါဝပ်၆၀၀၀အထိထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးအများစုကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းအားရပ်တန့်ပေးရန်ကျယ်လောင်စွာတောင်းဆိုကန့်ကွက်နေကြသည့်တိုင်စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်စီမံနေသည့်အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းကစီမံကိန်းဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုလည်း ဆိုခဲ့သေးသည်။
အစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းကလည်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့၏ မေးခွန်းများကို တုန့်ပြန်ဖြေဆိုခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ပြည်သူနှင့်အစိုးရခေါင်းဆောင်များသဘောထားကွဲလွဲနေမှုတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊အမှတ်(၁)နှင့်အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီး ဖြစ်သူဦးစိုးသိန်းက ထိုကိစ္စကြောင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုအား ချည့်နဲ့ မသွားစေသင့်ကြောင်း ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် မြစ်ဆုံနှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
လက်ရှိအစိုးရသည် ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရဖြစ်၍ ပြည်သူတို့၏ သဘောထားဆန္ဒကို အလေးထားနားထောင်မည် ဟုလည်း ဦးစိုးသိန်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 13:070comments
Posted by justfreeman at 12:580comments
Posted by justfreeman at 12:490comments
Posted by justfreeman at 12:410comments
ကိုဝိုင်း အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၂ မိနစ် .
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ကလဲ့စားချေလိုစိတ်ဖြင့်အနစ်နာခံလုပ်ဆောင်နေသည့်စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့်ပြည်သူ့အကျိုးကို မဆောင်ရွက်ဘဲယုံကြည်ချက်အတွက်ပေးဆပ်လိုစိတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြရန်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
“အနစ်နာခံရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာလို့ရှိရင်တခါတလေဒီစိတ်နဲ့ဒွန်တွဲပြီးတော့ကလဲ့စားချေချင်တဲ့စိတ်တွေ၊ မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေကတခါတည်းပေါ်လာပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ယုံကြည် ချက်အရ လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပေးဆပ်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ အင်အားတွေကို ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ အရေးအတွက်သုံးကြပါလို့ကျမကဆော်သြချင်ပါတယ်” ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း၂၃ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား တွင် ပြောသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းအန်အယ်ဒီဗဟိုဌာနချုပ်တွင်ကျင်းပသည့်အဆိုပါ အခမ်းအနားအဖွဲ့ချုပ်၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးဝင်တင်တို့ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ညီညီညွတ်ညွတ် ဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြားပြောဆိုသွားသည်။
ကလဲ့စားချေလိုစိတ်ဖြင့်အနစ်နာခံလုပ်ဆောင်နေသည့် စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့် ပြည်သူ့အကျိုးကို မဆောင်ရွက်ဘဲ ယုံကြည်ချက်အတွက်ပေးဆပ်လိုစိတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြရန်NLD၂၃နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင်အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
မနက်၁၁နာရီမှစတင်ပြီး၁နာရီကြာသည့်အခမ်းအနားသို့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊NLD ပါတီဝင်များနှင့်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီCRPP နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
အဖွဲ့ချုပ်၏ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ရွှေ၊အတွင်းရေးမှူးဦးလွင်၊ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဦးလွန်းတင်၊ဦးညွန့်ဝေတို့မှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းသဖြင့် မတက် ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျမတို့အနေနဲ့တကယ်အဓိကကျတဲ့အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတွေ ကျမတို့ လှမ်းပြီဆိုရင် ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်
တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုမရှင်းပြဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး”ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထဲ့သွင်းပြောကြား သွားသည်။
ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးကအန်အယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေမှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုလျော့ပါးထိခိုက်စေမည့်အပြောအဆိုအပြုအမှုများ မပြုလုပ်ကြရန်လည်း သတိပေး စကား ဆိုသည်။
ဦးဝင်းတင်ကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌ညီညွတ်ရေး စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရပ်တည် သွားကြရန်ပြောဆိုလိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်၍“ဘယ်လောက်ပြောင်းသလဲ၊ ဘယ်လိုပြောင်းသလဲ၊ဘာကြောင့်ပြောင်းသလဲ၊ဘာအတွက်ပြောင်းသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းဖြေရမယ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖြေရမယ်၊ကိုယ့်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း ဖြေရမယ်” ဟု ဆိုသည်။
ပါတီ၏ကြေညာချက်တွင်မူ “ကျွန်ုပ်တို့ အပေးအယူသဘောမျိုးဖြင့်လျော့ပေါ့ တောင်းဆိုခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်း၍မဟုတ်၊ယခုအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးအကျိုးကိုမြန်မြန်ထက်ထက် သယ်ပိုးချင်သော ဆန္ဒအတွက်ဖြစ် ပေသည်”ဟု အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ၁၉၄၆ ခု ဇန်နာဝါရီ ၂ဝ ရက် တွင် ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ လူထုအစည်းအဝေး၌ မိန့်ကြားခဲ့သော လမ်းညွန်ချက်ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။
Posted by justfreeman at 15:510comments
Posted by justfreeman at 15:340comments
မျိုးသန့် အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၅ မိနစ် .
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတင်သွင်းသည့်'ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်း လှည့်လှည်ခွင့်'ဥပဒေမူကြမ်းတွင်ပါရှိသည့်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်နေရာကန့်သတ်ထားချက်ကို အောက်လွှတ်တော်ဥပဒေမူကြမ်းကော်မတီမှဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်ဟုလွှတ်တော်အမတ်များက ပြောသည်။
နေရာများ၊စာသင်ကျောင်း၊ဘူတာရုံ၊လေဆိပ်၊သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း၊ကားဂိတ်၊ဆေးရုံတို့နှင့် အဆိုပါ နေရာတို့ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်နေရာများတွင်စီတန်းခွင့်နှင့်စုဝေးခွင့်မရှိ'ဟူသည့် ကန့်သတ်ချက် ပါရှိသည်။
'ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လှည်ခွင့်'ဥပဒေမူကြမ်းတွင်ပါရှိသည့်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်နေ ရာကန့်သတ်ထားချက်ကိုအောက်လွှတ်တော်ဥပဒေမူကြမ်းကော်မတီမှဖြုတ်ဟုလွှတ်တော်တက် အမတ်များကပြော(ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
ဥပဒေမူကြမ်းတွင်ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လှည်ခွင့်တို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ အထွေအထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတွင်ခုနှစ်ရက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားကာခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဟုပါရှိပြီး စီတန်းလှည့်လှည်ခွင့်ပြုမပြုဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
ဥပဒေမူကြမ်းပါအထက်ပါအချက်နှင့်ပတ်သက်၍မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှခွင့်ပြုချက်မပေးပါက၊တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံသို့ ထပ်မံတင်ပြနိုင်သည်ဟုလည်း ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီက ပြင်ဆင်လိုက်
ဥပဒေမူကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးလိုသည့်လွှတ်တော်အမတ်များအနေဖြင့်စက်တင်ဘာ၂၉ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကာ လွှတ်တော်ရုံးသို့ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အင်္ဂါနေ့အထက်လွှတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွင်လွှတ်တော်အမတ်ဦးမောင်စောဖြူမှရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ်အတွင်းလယ်ယာမြေဧက၁၅ဝကိုဒေသခံစစ်တပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများမှသိမ်းယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာတွင်လယ်ယာမြေနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်မှတောင်သူလယ်သမားများအကျိုးကိုရှေ့ရှု လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသွားသည်။
အထက်လွှတ်တော်၏ဆွေးနွေးပွဲတွင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်မှလွှတ်တော်အမတ်များ လွှတ်တော်အတွင်းသုံးနှုန်းပြောဆိုသည့်အသုံးအနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍မသင့်တော်သည်များကို မိမိတဦးတည်းကဝင်ရောက်ဟန့်တားနေရပြီးလွှတ်တော်အမတ်များမှလည်းမသင့်တော်ဟုယူဆသည့် အသုံးအနှုန်းများကို ကိုယ်တိုင် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ပြောသွားသည်ဟု သိရသည်။
အထက်လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးနေသည့်မေးခွန်းများနှင့်အဆိုများသည်ကုန်သလောက်ရှိနေပြီဟု အမတ်များကခန့်မှန်းနေကြပြီးအထက်လွှတ်တော်စည်းဝေးပွဲကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်တရက်ရပ်နားမည် ဖြစ်သည်။
ခင်ဦးသာ Thursday, 22 September 2011 17:50
၂၀၁၁သြဂုတ်၁၉ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံခဲ့သည် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်အပြောင်းအလဲတချို့ကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မကြုံစဖူး အပြောင်းအလဲဖြစ်နေသောကြောင့် ကူညီသင့်ကြောင်းICG၏ စာမျက်နှာ ၂၁ မျက်နှာပါ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ရေးသားထားသည်။
ဦးသိန်းစိန်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံမှ ခွဲထွက်၍ အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်မှု ပုံစံသစ်ကို ကျင့်သုံးကာ အပြောင်းအလဲ အမှန်တကယ် ပြုလုပ်လိုသူ တဦးဖြစ်ပြီး ထောက်ခံအားပေးမှု မရှိလျှင် လုပ်ဆောင်ချက်များ တုံ့နှေးသွားလိမ့်မည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ သကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲကို ကြိုဆို ထောက်ခံထားသည်။
သမ္မတတာဝန်ယူပြီးများမကြာမီမေလ၁၆ရက်နေ့တွင်အကျဉ်းသား အများအပြားအတွက် ပြစ်ဒဏ် တနှစ်လျှော့ပေးပြီး လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ကြေညာခဲ့ကြောင်း၊ထိုသို့ လွှတ်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၃ ရက်တိုင် ဆွေးနွေးမှုတွင်သူ၏ အစီအစဉ်ကိုမလိုလားသူတချို့ရှိခဲ့ကြောင်း အာဆီယံ သံတမန် တဦးကို ကိုးကား၍ ICG က ရေးသားထားသည်။
ဦးသိန်းစိန်၏သြဂုတ်လ၁၉ ရက်နေ့မိန့်ခွန်း၌ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ရာအာဏာရှင်စနစ်ထက်စာလျှင်လုံးဝခြားနားသောအုပ်ချုပ်မှုပုံစံသစ်ကို စတင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ICG က ဆိုသည်။
မည်မျှပြောင်းလဲနေသည်ဆိုသည်ကိုစောင့်ကြည့်သူတချို့ကအာရုံမပြုဘဲမပြောင်းမလဲ ကျန်နေသည်များကိုသာ လက်ညှိးထိုးနေကြသည်ဟုလည်း ဝေဖန်ထားသည်။
အစိုးရသစ်သည် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထောက်ပြထားသေးသည်။
လက်ရှိအစိုးရအပေါ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု မရှိတော့ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက အပြုသဘောမဆောင်သည့် ပြုမူမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဒုသမ္မတသီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးကိုပင် ဇူလိုင်လအတွင်း ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးအနှောင့်အယှက်မပြုရန် သတိပေးခဲ့ကြောင်း အာဆီယံ သံတမန်တဦးကို ကိုးကာ၍ ICG က ဆိုထားသည်။
အနောက်နိုင်ငံများသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောတိုးတက်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန် အသင့်ရှိသည်ကိုအချက်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ထို့ကြောင့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ကလုပ်ပိုင်ခွင့်များ အတွင်းမှပင် နည်းပညာအကူအညီ၊ အကြံဉာဏ်များ ဖြစ်နိုင်သမျှ ပေးအပ်ကူညီကြရန်လည်း တိုက်တွန်း ရေးသားထားသည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ၌အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့သော အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိစ္စကို စစ်တပ် ကိုယ်စားလှယ်များကပါ ထောက်ခံ ဆွေးနွေးနေမှုမှာ အံ့သြဖွယ် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်သည်ဟု ICG က ချီးကျူးလိုက်သည်။
လွှတ်တော်တက်ရောက်နေသည့် ကိုယ်စားလှယ်တချို့သည် သေးငယ်သော ကိစ္စရပ်များကို တင်ပြဆွေးနွေးနေခြင်းမှာ အတွေ့အကြုံမရှိသေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အရည်အချင်းပြည့်ဝရေးအတွက်တခြားနိုင်ငံလွှတ်တော်များကကူညီပေးသင့်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
သမ္မတ၏ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ကိစ္စများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်တော်ပြန်လာရေး ဖိတ်ခေါ်မှု စသည်တို့ကို အပြုသဘောအပြောင်းအလဲအဖြစ်ICGက ရှုမြင်ထားသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ နိုင်ငံတကာ၏ ထောက်ခံမှု မရှိလျှင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလျော့သွားစေပြီးအစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရှိ သဘောထား တင်းမာသူတချို့ အားကောင်းသွားစေနိုင်ကြောင်း ICG က သုံးသပ်ထားသည်။
ICG အဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ ICG ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
Posted by justfreeman at 19:000comments
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၄၂ မိနစ် .
နယူးယောက်မြို့တွင်ကျင်းပCGIညီလာခံပရိသတ်သို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့ခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုတွင်မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးပျော့ပြောင်းလာသည့် အခြေအနေကို ပြောခဲ့ပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့်
ရွေးကောက်ပွဲသည်အပြစ်အနာအဆာများရှိကာမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်ဟုလည်း ပြောခဲ့သည်။
“ကျမတို့တကယ်လိုအပ်နေတာကကျမတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကိုသတိထားစောင့်ကြည့် မှုပါပဲ”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပရိသတ်ဖြစ်သည့်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွါးရေးခေါင်းဆောင်များအား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း Agence France-Presse သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခြေအနေသည်ပြောင်းလဲနေခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး“အပြောင်းအလဲဆိုတာအမြဲတမ်းတော့ အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရင်တောင် အပြောင်းအလဲတွေဟာ အမြဲကြံ့ကြံ့ခံ တည်မြဲဖို့က မသေချာပါဘူး” ဟု ဗွီဒီယိုထဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
“ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာကိုကမ္ဘာကြီးက ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကို ကျမတို့ အလိုရှိပါတယ်”
ဆိုတာကိုသိနေဖို့လိုပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတာကိုမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာနေဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ဒေါ်စုက ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာ့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့၏အရေးပါမှုကိုလည်းအလေးထား ပြောကြား ခဲ့သလို ထိုနိုင်ငံများ အနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုမြန်မာအစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေး နည်းတူ အလေးထားလိမ့်မည် ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ပြောခဲ့သည်။
ဒေါ်စုကပြောကြားရာတွင်ထိုနိုင်ငံများအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းကောင်းများ အမြဲတမ်း ဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း အချိန်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှအခြေအနေများလည်းပြောင်းလဲ လာတတ်သဖြင့် အိမ်နီးချင်းကောင်းများ ဆက်လက်ဖြစ်နေစေရန် တချို့မူဝါဒများကို ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဘယ်ခရီးကိုမဆို ခြေလှမ်းတွေ တလှမ်းပြီးတလှမ်း လှမ်းရင်း လုပ်ရတာပါ။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရမယ်ဆိုရင်
ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုထဲကို ကျမ စတင် ဝင်ရောက်တုန်းက ကျမရဲ့ ဘဝတခုလုံးကို မြှုပ်နှံထားရလိမ့်မယ်လို့ မထင်မိခဲ့ပါဘူး” ဟု ဒေါ်စုက ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုးတက်မှုတချို့ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်ဟု သူမက ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် “အစခရီး၏ အစ” သာ ရှိသေးသည်ဟု သူမက ဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကရှိ အာရပ်နိုင်ငံများ တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့်တော်လှန်ရေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ခက်ခဲကြောင်းဆိုခဲ့ပြီး အင်တာနက်နှင့် လူမှုရေး မီဒီယာများ တည်ရှိနေမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ခြားနားကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
ရန်စောင်မှု ခုနှစ်သက္ကရာဇ်များကို ကျော်လွှားရန်မှာလည်း ခက်ခဲကြောင်း သူက ဆိုခဲ့သေးသည်။
“နှစ်ဘက်စလုံးက အပေးအယူ ပြုလုပ် ညှိနှိုင်းဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ရမှာမို့ အမျိုးသား ပြန်လည်စည်းလုံးရေး လုပ်ငန်းဟာ တခါတရံမှာ အားလုံးထက် ပိုပြီး ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 18:300comments
Posted by justfreeman at 18:210comments
Posted by justfreeman at 18:100comments
ခင်ဦးသာ Tuesday, 20 September 2011 18:08
.မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အသံကိုအလေးထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို၂၀၁၄ ခုနှစ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံ၏အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနေရာပေးရေးမပေးရေး ဆုံးဖြတ်မည်ဟုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ကြောင်းAPသတင်းတပုဒ်တွင်ယနေ့ ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင်လူထုအခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့၏အသံကိုလည်းနားထောင်မည်ဟုဝန်ကြီးမစ္စတာမာတီ နာတာလီဂါဝါက ပြောလိုက်သည်။
အင်ဒိုဝန်ကြီးကလာမည့်လတွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်၍မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုများကို အကဲဖြတ်ဦးမည်ဟု ဆိုထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားသည် လက်ရှိ အလှည့်ကျ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ယူထားသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်အာဆီယံဥက္ကရာထူးကိုလက်ခံလိုကြောင်း ဇူလိုင်လအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းတွင်ကျင်းပသောအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင် တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
အစိုးရအဆက်ဆက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကြီးစိုးသောမြန်မာနိုင်ငံကိုအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း မပြုရန် တောင်းဆို ဖိအားပေးသူများထဲတွင် အစိုးရအဖွဲ့များ၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များလည်း ပါဝင်သည်။
ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရန်နှောင့်နှေးမှု၊နိုင်ငံရေးသမားများကိုထိန်းသိမ်းထားမှု၊ဒေသအနှံ့တွင်လုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုတို့ကို ထောက်ပြပြီး ကန့်ကွက် ဖိအားပေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်၂၀၀၆ခုနှစ်အာဆီယံအသင်းအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မည့်အခြေအနေနှင့်ကြုံခဲ့ရဖူးသည်။ သို့သော်လည်းနိုင်ငံတကာဖိအားများကြောင့်မြန်မာအစိုးရကထိုတာဝန်ကိုပြည်တွင်းရေးပြဿနာများကို အကြောင်းပြ၍ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
အစိုးရကထိုသို့ တွေ့ဆုံခြင်းမှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးရရှိရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမား အများအပြားက ဝေဖန်နေကြသည်။
အာဆီယံအသင်းဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသည်အသင်းဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုအလှည့်ကျတာဝန်ယူကြသည်။ဥက္ကဋ္ဌရာထူးသက်တမ်းမှာ တနှစ် ဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 16:450comments